Kwakave sei kusikwa kwenyika zvinoenderana neBhaibheri ▷ ➡️
Kusikwa kwenyika kwaive sei maererano neBhaibheri. Munhoroondo yese, tsika dzakasiyana dzakaedza kupindura mavambo epasi. Kune rimwe divi, sainzi inoedza kujekesa imwe nyaya. Nekudaro, iyo yakanyanya kunzwikwa uye yakanyanya kufundwa nyaya muWest yese kwezviuru zvemakore ndiyo yakaudzwa muBhaibheri.
Kunyangwe chiri chokwadi kuti nhasi hazvibvumike kutenda izvo nyika aigona kunge akagadzirwa mumazuva manomwe, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti bhaibheri harisi basa chairo asi rekunyora. Saka isu tinogona kuwana makuru echokwadi nezvekusikwa kwenyika.
1 Kusikwa kwenyika kwaive sei maererano neBhaibheri
2 Chekutanga zuva kusikwa kwenyika zvinoenderana neBhaibheri
3 Zuva repiri
4 Zuva rechitatu
5 Zuva rechina
6 Zuva rechishanu
7 Zuva rechitanhatu
7.1 Kusikwa kwemunhu kwakaenderana sei nebhaibheri
8 Zuva rechinomwe kusikwa kwenyika zvinoenderana neBhaibheri
Zvinoenderana neBhaibheri, kusikwa kwenyika kwaive chiito chemwari. Nemashoko enyu, Mwari akaumba zvese zvakasikwa uye akapa hupenyu kuzvisikwa zveses. Pakutanga kwekusika, nyika yakanga isina chimiro, kwaingova nerima chete, mvura ine mhirizhonga uye Mweya waMwari wakafamba pamusoro payo. Zvino, muvhiki, Mwari akaumba nyika yatinoziva.
Chekutanga zuva kusikwa kwenyika zvinoenderana neBhaibheri
Pazuva rekutanga rekusikwa kwenyika, Mwari vakati "Ngakuve nechiedza" uye chiedza chakaonekwa. Chiedza nerima zvakaparadzana, uye Mwari akadana nguva kubva zuva ra chiedza uye chikamu chenguva mu noche kwasviba. Izvi ndizvo zvakaitwa nezuva rekutanga.
Pakutanga Mwari akasika matenga nenyika.
Zvino nyika yakange isina chimiro, isina chinhu, uye rima raiva pamusoro peudzamu; uye Mweya waMwari waifamba pamusoro pechiso chemvura.
Uye Mwari akati: Ngakuve nechiedza; uye kwakava nechiedza.
Zvino Mwari wakaona kuti chiedza chakanaka; Mwari ndokuparadzanisa chiedza nerima.
Mwari akatumidza chiedza kuti "masikati," uye rima akaritumidza kuti "usiku." Uye manheru nemangwanani rimwe zuva.
Genesi 1: 1-5
Mwari akasika denga panyika
Pazuva rechipiri, Mwari akasika denga (iyo mhepo) pamusoro penyika. Denga rakashanda kupatsanura mvura muiri mvura mamiriro, pamusoro penyika, kubva mumvura iri gaseous mamiriro. Saka kwakauya kutenderera kwemvura.
Zvino Mwari wakati: Ngakuve nenzvimbo pakati pemvura, uye ngaiparadzanise pakati pemvura nemvura.
Zvino Mwari wakaita nzvimbo, ndokuparadzanisa mvura yaiva pasi penzvimbo, nemvura yaiva pamusoro pemuganhu. Zvikaita saizvozvo.
Mwari akatumidza nzvimbo kuti Denga. Uye masikati nemangwanani akavapo, zuva repiri.
Genesisi 1: 6-8
Pazuva rechitatu Mwari akasika nyika
Pazuva rechitatu, Mwari akasika ivhu rakaoma. Mvura yakafukidza pamusoro penyika yose, saka Mwari akavaraira kuti vadzokere shure, vachisiya imwe nzvimbo yacho pachena. Mwari vakadaidza chikamu chakaoma che pasi uye kumvura ye makungwa. Saka pakasimuka iyo makondinendi uye zviwi.
Pazuva rimwechete, Mwari akafukidza nyika ne zvinomera. Mhando dzose dzezvirimwa dzakamera kubva muvhu, dzese marudzi, chirimwa chega chega chine kugona kubereka.
Mwari ndokuti: Mvura iri pasi pedenga ngaiungane panzvimbo imwe, kuti iome. Zvikaita saizvozvo.
Mwari akatumidza pasi pakaoma, kuti nyika, nemuunganidzwa wemvura akautumidza kuti makungwa. Mwari akaona kuti zvakanaka.
Uye Mwari akati, "Nyika ngaimerese uswa hwakasvibirira, uye uswa hunopa mbeu; michero yemichero inobereka michero maererano nerudzi rwayo, kuti mbeu yayo iri mairi, pasi. Zvikaita saizvozvo.
Saka ivhu rakabereka huswa hwakasvibirira, huswa hunotakura mbeu maererano nemasikirwo ayo, uye muti unobereka michero, mbeu yawo iri mukati mawo, maererano nemhando dzayo. Mwari akaona kuti zvakanaka.
Uye madekwani akavapo nemangwanani akavapo, zuva rechitatu.
Genesisi 1: 9-13
Pazuva rechina Mwari akasika nyeredzi
Pazuva rechina, Mwari akasika iyo mitumbi yekudenga kucherechedza kufamba kwenguva (mazuva, mwedzi, makore ...). Akazadza denga (nzvimbo) ne nyeredzi ndokugadzira nyeredzi yakakura kudarika nyika (iyo Sol) kujekesa zuva. Mwari akasikawo iyo mwedzi, diki diki, kuvhenekesa husiku.
Zvino Mwari wakati: Ngakuve nezviedza panzvimbo yedenga, kuti zviparadzanise masikati neusiku; uye zvinoshanda sezviratidzo zvemwaka, zvemazuva nemakore,
uye ngazvive zviedza panzvimbo yedenga, kuti zvipe chiedza panyika. Zvikaita saizvozvo.
Zvino Mwari wakaita zviedza zvikuru zviviri; chiedza chikuru kuti chitonge masikati, uye chiedza chidiki kuti chitonge usiku; akaitawo nyeredzi.
Mwari akazviisa panzvimbo yedenga kuti zvivhenekere panyika.
uye zvitonge masikati neusiku, nekuparadzanisa chiedza kubva parima. Mwari akaona kuti zvakanaka.
Uye madekwana akavapo, nemangwanani akavapo, zuva rechina.
Genesisi 1: 14-19
Pazuva rechishanu Mwari akasika mhuka dzemumvura
Pazuva rechishanu, Mwari akasika iyo mhuka dzemumvura. IYE akairaira uye mvura yakazadzwa nehove nedzimwe mhuka dzemumvura, hombe nediki. Mwari akasikawo shiri, izvo zvakamuisa kuti agare pasi pano uye abhururuke nepadenga. Mwari akaropafadza shiri nemhuka dzemumvura uye akazviraira kuti zviberekane kuti zvizadze nyika.
Zvino Mwari wakati: Mvura ngaibereke zvisikwa zvipenyu, neshiri dzinobhururuka pamusoro penyika, munzvimbo yedenga.
Zvino Mwari wakasika mabukanana egungwa, nezvipenyu zvose zvinokambaira, izvo mvura yakabereka maererano nemarudzi azvo, neshiri dzose dzine mapapiro, maererano nemarudzi adzo. Mwari akaona kuti zvakanaka.
Mwari akazviropafadza, achiti, "Berekanai muwande muzadze mvura iri mumakungwa uye muwande shiri dzenyika."
Zvino madekwani akavapo, nemangwanani akavapo, zuva reshanu.
Genesisi 1: 20-23
Pazuva rechitanhatu Mwari akasika mhuka dzeTeresitiyaro nemunhu
Pazuva rechitanhatu, Mwari akasika mhuka dzepanyika. Mhando dzese dzemhuka dzinorarama pasi uye dzisingabhururuke dzakasikwa musi iwoyo, imwe neimwe iine kugona kubereka.
Uye Mwari akati, "Nyika ngaibereke zvisikwa zvipenyu maererano namarudzi azvo, mhuka dzedenga nenyoka, uye nemhuka dzenyika maererano namarudzi adzo." Zvikaita saizvozvo.
Mwari akaita mhuka dzenyika dzine marudzi adzo, nezvipfuwo zvine marudzi azvo, nezvinhu zvose zvinokambaira panyika zvine marudzi azvo. Mwari akaona kuti zvakanaka.
Genesisi 1: 24-25
Kusikwa kwemunhu kwakaenderana sei nebhaibheri
Saka Mwari vakataura vega uye vakasarudza kuumba chisikwa chakasarudzika, mumufananidzo wavo uye akafanana navo, kuti vatonge mhuka dzese dzavakasika. Saka vakabuda murume nemukadzi.
Mwari akaropafadza murume nemukadzi uye akavaraira kuti vabereke, vachizadza nekutonga pasi. Mhuka dzese dzepanyika, dzemumvura uye dzinobhururuka dzaive pasi pake. Mwari zvakare akapa miti kuti ive chikafu chevanhu nemhuka dzose. Aya ndiwo marongero akaita Mwari kusika kwenyika.
Ipapo Mwari akati: Ngatiitei munhu nomufananidzo wedu, akafanana nesu; uye mutonge pamusoro pehove dzegungwa, nepamusoro peshiri dzedenga, pamusoro pemhuka, nepanyika yose, nepamusoro pemhuka imwe neimwe inokambaira pamusoro penyika.
Uye Mwari akasika munhu nomufananidzo wake, akamusika mumufananidzo waMwari; akavasika murume nemukadzi.
Uye Mwari akavaropafadza, akati kwavari: Berekai muwande; Zadzai nyika, uye muikurire, uye mubate pamusoro pehove dzegungwa, neshiri dzedenga, nezvikara zvese zvinofamba pasi pevhu.
Zvino Mwari wakati: Tarira, ndakupa umwe neumwe muti unobereka mbeu, uri panyika yose, nemiti yose ine michero, inobereka mbeu; Izvo zvichava zvako zvekudya.
Kumhuka dzose dzenyika, nekushiri dzose dzedenga, nezvose zvinokambaira panyika, zvine mweya weupenyu, zvinomera zvose zvakasvibirira zvichava zvokudya zvazvo. Zvikaita saizvozvo.
Zvino Mwari wakaona zvose zvaakaita, onei zvakanaka kwazvo. Uye madekwana akavapo, nemangwanani akavapo, zuva rechitanhatu.
Genesisi 1: 26-31
Zuva rechinomwe kusikwa kwenyika zvinoenderana neBhaibheri
Pazuva rechinomwe Mwari akazorora uye akaropafadza zvisikwa zvake
Pazuva rechinomwe, Mwari akazorora. Akagutsikana, nekuti zvese zvaakanga asika zvaive zvakanaka. Mwari akaropafadza zuva rechinomwe akariita dzvene nekuti raive zuva rekuzorora.
Saka matenga nepasi zvakapera, pamwe nehondo yazvo yese.
Mwari akapedza nezuva rechinomwe basa raakaita; ndokuzorora nezuva rechinomwe pabasa rake rose raakange aita.
Uye Mwari akaropafadza zuva rechinomwe akariita dzvene, nekuti pairi akazorora kubva pabasa rake rese raakange aita mukusika.
Genesisi 2: 1-3
Kunyangwe iri chaiyo kana fananidzo, iyo nyaya yekusika inotiratidza kuti nyika yakasikwa naMwari. Yakanga isiri nyaya yemukana. Kusikwa kwenyika kunotiratidzawo kukosha kwedu sezvisikwa zvakagadzirwa nemufananidzo waMwari uye nebasa redu sevatongi nevadziviriri vepasi. Mwari anofara nezvakasikwa uye anoda kutiropafadza nekuzorora.
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba chinyorwa ichi chinokubatsira kuti unzwisise kusikwa kwenyika kwainge kuri sei maringe neBible. Kana ikozvino iwe uchida kuziva sei Mwari akazorora nezuva rechinomwe, ramba uchivhura Ziva.online.